12 ဝေဖန်မူလစာမျက်နှာ element တွေကို | Martech Zone
12 ဝေဖန်မူလစာမျက်နှာ Element တွေကို
တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 29, 2012 အင်္ဂါနေ့, မေလ 3, 2016 Douglas Karr
Hubspot သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုမောင်းနှင်ရန်အကြောင်းအရာများကိုမောင်းနှင်ရာတွင်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက whitepapers, demos နှင့် ebooks များစွာကိုထုတ်လွှင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ဖူးပါ။ HubSpot ယခုတစ်ခုကယ်တင်တတ်၏ ပင်မစာမျက်နှာ၏ 12 အရေးပါဒြပ်စင်အပေါ် infographic.
Homepage သည် ဦး ထုပ်များစွာကို ၀ တ်ဆင်ပြီးနေရာများစွာမှလာသည့်ပရိသတ်များစွာကိုအစေခံရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သီးခြားချန်နယ်တစ်ခုမှအသွားအလာကိုတိကျသောမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပေးသင့်သည့်သီးခြားဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာနှင့်မတူပါ။ Landing စာမျက်နှာများသည် conversion ည့်သည်နှင့်အဓိကသက်ဆိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသောပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုတွင်းထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများတည်ဆောက်ရာတွင်ကူညီသည်။ ငါထင်သည်ဟုငါပြောရမည် HubSpot ဒီ infographic မှာအမှတ်အသားကိုလွဲသွားတယ်။
ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက် - call-to-action သည်အရေးကြီးသောအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ သို့သော်လူတိုင်းကသရုပ်ပြရန် (သို့) အပိုအရင်းအမြစ်များကိုရယူချင်သည်မဟုတ်။ တစ်ခါတစ်ရံသင့်ဖောက်သည်သည် ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးလိုအပ်သည် ဖုန်းနံပါတ် or စာရင်းသွင်းပုံစံ စတင်ရန်။
လူမှု Icons - ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအားပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အရေးပါမှုကိုလျှော့တွက်။ မရပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်လူများသည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ဆိုက်ရောက်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည် ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သင့်ကိုပိုမိုသိကျွမ်းရန် Facebook, Google+ သို့မဟုတ် Twitter တွင်သင်နောက်လိုက်ပါလိမ့်မည်။
သတင်းလွှာ Subscription - မည်သည့်ပင်မစာမျက်နှာ၏မဆိုအငယ်ဆုံးသောအချက်မှာသတင်းလွှာ subscription ဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ရန်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ရန်အလားအလာအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုပေး ထိမိခဲ့တယ် သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှသတင်းများ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူအဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုသိမ်းဆည်းခြင်းသည်အလွန်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ - သင်၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်၎င်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
ငါအသုံးအနှုန်းနှင့်အတူငြင်းခုန်လိမ့်မယ် အင်္ဂါရပ်များ အဖြစ်ကောင်းစွာ #5ပေါ်မှာ။ ဒါဟာအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုဖြစ်ကြောင်းထပ်ခါထပ်ခါသက်သေပြခဲ့သည် အကျိုးကျေးဇူးများထက်အင်္ဂါရပ်များမှဆွဲဆောင်။ သင်၏အသစ်သောလှည့်စားသတင်းပို့ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်ကုမ္ပဏီမှငွေရှာနိုင်သည့်အတွက်သင်တင်ပြနေသည့်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအချက်အလက်များကိုပြသခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏ပင်မစာမျက်နှာသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာရည်ညွှန်းမည့်၊ လူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတွေ့ရှိရန်သေချာစေမည့်သော့ချက်စာလုံးများအတွက်သင်၏ပင်မစာမျက်နှာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ SEO သည်သင်၏ပင်မစာမျက်နှာဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အမြဲအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်ဆုံးလူမှုမီဒီယာဘလော့ ၁၀ ခုဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီ 30, 2012 မှာ 4: 54 AM
တကယ်မှန်ပါတယ်! နှင့်နှစ်ရက်အကြာတွင်ပြန်ဆင်းလာသည့်စာမျက်နှာများ၏အရေးပါမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဂူးဂဲလ်မှနောက်ဆုံးသတင်းကိုရရှိခဲ့သည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်စာမျက်နှာပြင်ပတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုလုပ်ဆောင်နေပါကသော့ချက်စာလုံးများ၏မှန်ကန်သောစာရင်းနှင့်ထိုသော့ချက်စာလုံးများကကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားမည့်သင့်တော်သောစာမျက်နှာတစ်ခုရှိရန်အရေးကြီးသည်။
31:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 12, 56
သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါသတင်းလွှာ subscription ကိုဒြပ်စင်ပေါ်တွင်သင်၏အမှတ်ဒုတိယ! ကျွန်ုပ်ထံမှကြားလိုသောကုမ္ပဏီများသို့စာရင်းပေးသွင်းရန်မည်သို့ရှာဖွေရမည်ကိုကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်သည်။
31:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 18
ငါဒီစာမျက်နှာမှပျောက်ဆုံးအကြီးမားဆုံးဒြပ်စင်တစ်ခုလူမှုရေး icon များဖြစ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီတွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပုံသဏ္twoာန်နှစ်မျိုးရှိသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ တစ်ခုမှာကုမ္ပဏီအတွက်၊ ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံးနှင့်နောက်တစ်ခုသည်အသုံးပြုသူလည်ပတ်နေသည့်စာမျက်နှာသို့မဟုတ်ဆောင်းပါးအတွက်ဖြစ်သည်။